दैनिक लिपिस्टिकको प्रयोग गर्नुहुन्छ, निम्तिन सक्छ यस्तो खतरा !! | सुदुरपश्चिम खबर
महिलाहरुका लागि श्रृं’गारपटार अनिवार्य जस्तै छ । बिशेष गरि आफ्नो सौन्दर्यलाई लिएर बढि चनाखो हुँने कार’णले उनीहरु श्रृंगारपटारमा ध्यान दिन्छन । महिलाका लागि सुन्दरी हुनु एक गुण नै हो ।
बिहाना उठे पछि महिलाहरु आफ्नो श्रृंगा’रपटारमा नै समय लगाउँछन् । यस्तैमा उनिहरुले लाली पाउडर समेत लगाउने गर्छन् । मेक अप गर्दा लिपस्टिकको भूमिका पनि म’हत्वपुर्ण नै मानिन्छ ।
आफूले लाउने लिपिस्टिकले स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभा’व पारिरहेको छ भन्ने बारेमा भने उनिहरु जानकार छैनन । केही समयअघि अमेरीकामा गरिएको एक अध्य’ननले लिपिस्टिक प्रयोग गर्ने महिलाको दिमागी स’क्रियता नै कमजोर हुँदै गएको फेला परेको थियो ।लिपिस्टिकमा एक किसिमको सीसा प्रयोग हुन्छ ।
जुन मानव स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले उच्च हा’निकारक हुन्छ । अध्ययनमा २२ वटा लिपस्टिक ब्राण्डको अध्ययन गरिएको थियो । जसमध्ये ५५ प्रतिशतमा (लिड)जस्तै हा’निकारक तत्वको प्रयोग गरेको पाइयो ।नेपालमा पनि केही समय अघि सरकारले सौन्दर्य साम’ग्रीमाथी हुने रसायनको प्रयोगबारे परीक्षण गरेको थियो ।
चिकित्सकहरुका अनुसार सीसा मानवीय स्वास्थ्यका लागि धेरै हानि’कारक हुन्छ । मानवीय स्वास्थ्यमा नियमित सम्पर्कमा रहे लिडका का’रण क्यान्सर हुने तथा दिमागी असर कम हुनेजस्ता जो’खिम हुने विशेषज्ञहरुले जनाएका छन ।
बैतडीको देहिमाण्डौँ बजारको सडक छेउमा एक जना वृद्ध मृत फेला !!